उपेन्द्रले बैठक बोलाएपछि महन्थको आपत्ति (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र यतिबेला विवाद चर्किएको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठक बोलाएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीले कुनै आधिकारिक बैठक
काठमाडौं । नयाँ सरकारको गठनबारे छलफल गर्न बसेको जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठक कुनै ठोस निर्णय बिना नै टुङ्गिएको छ । बालकुमारी पार्टी कार्यालयमा बसेको उक्त दलको बैठकमा भोलिसम्ममा
ओली विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगत्तै बाबुरामकाे यस्ताे ट्वीट
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केही समयदेखि हुर्केको निरंकुश ओली प्रवृत्ति भने परास्त भइनसकेको बताएका छन् । सोमबार साँझ ट्वीट गर्दै उनले अन्ततः संसदले
जसपाको बहुमत केपी ओलीविरोधी लाइनमा
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीभित्र केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत देखिएको छ । जसपा स्रोतका अनुसार ओलीलाई विश्वासको मत दिन हुँदैन भन्ने लाइनको अगुवाइ गरेका उपेन्द्र यादव
सरकारद्वरा १२० जनाको मुद्धा फिर्ता, जसपालाई सत्तामा जाने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका १ सय २० जना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँग जसपालाई अब सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ । यद्यपि
एमालेलाई सघाएसंगै लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा विभाजित
काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ३ सहित ४ प्रदेश सांसदले मन्त्री पद सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजित बनेको छ । यो विभाजनले
यसरी भयो तीन घण्टामा चार मन्त्रीको नियुक्ति
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष कुमार पाण्डे, यादव र कल्पना पाण्डे लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनेदेखि नै मन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए । नेकपा विवादले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्न थालेपछि
नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षीय प्रयास सह्रानीय–डा.भट्टराई
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिपक्षीय धर्म निभाउने कांग्रेसको संकेत सह्रानीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा
डा. भट्टराईका दुई विकल्पः प्रतिगमनकारीसंग मिल्ने कि विदा गर्ने ?
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको चेतावनी दिएका छन् । आज बिहान एक ट्वीट सन्देशमार्फत् डा. भट्टराईले प्रतिगमनको
रेशम चौधरीको रिहाइ सत्ता स्वार्थको शर्त बन्न हुँदैन– डा. भट्टराई
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले रेशम चौधरीलगायतको रिहाइ सत्ता स्वार्थको गोटी बन्न नहुने बताएका छन । रेशम चौधरीलगायतको रिहाइ निःशर्त हुनुपर्ने डा.